Mampikorontana avokoa izay mitranga sy atao… | NewsMada
Mampikorontana avokoa izay mitranga sy atao…
Efa nampoizina, paipaika politika no mibahan-toerana amin’ny lalàm-pifidianana… mampiady. Kajikajy politika hatramin’ny fotoana farany hoe tsy maintsy nandaniana azy tamin’ny fivoriana tsy ara-potoana. Raha tsy izany, tsy ho tratra ny fifidianana filohan’ny Repoblika: 25 novambra hatramin’ny 25 desambra ny fihodinana roa.
Mila telo volana mialoha ny famoahana ny tetiandrom-pifidianana sy ny fihaikana mpifidy amin’izany, ny 25 aogositra farafahelany. Ny dikan’izany, tsy maintsy nolanina amboletra ny lalàm-pifidianana, na nanaovana kolikoly aza. Izay ny paipaika sy kajikajy nampitarazohana ny famoahana ny volavolana lalàm-pifidianana izay elabe izay?
Raha ny tokony ho izy, efa tamin’ny taona 2016 no tokony ho namoahana ny lalàm-pidianana vaovao, saingy… Nihemo-dava na niniana tsy natao mba tsy hanatanterahana ny fifidianam-paritra. Olom-boatendry hatrany, ohatra, ny lehiben’ny faritra, azo bakoina amin’ny fifidianana. Ho fanamparana hosoka sy hala-bato… ?
Mbola ao anatin’ny tetika politika maloto koa ny tsy namoahana ny datim-pifidianana izay elaba izay, na lazaina aza hoe ny 25 novambra ka hatramin’ny 25 desambra? Mety hihemotra tsinona, ka hambara amin’izany fa noho ny antony tsy azo anoarana. Satria tsy misy ny lalàna momba ny fifidianana filoham-pirenena, ohatra.
Paipaika sy kajikajy izany rehetra izany, fifikirana amin’ny toerana sy fanamafisam-pahefana noho ny tombontsoa manokana? Arakaraka ny mahaela eo no mahatofoka ny vahoaka, fa tsy misy inona vita. Efa izay handresena amin’ny fifidianana fotsiny izao no mampikoropaka… hanao ny tsy fanao, fa tsy izay fampandrosoana.
Ho azo amin’izany ve ny vahoaka? Ahina na atahorana ny fitsaram-bahoaka… Krizy? Efa karazana fanakorontanana avokoa tsinona izay mitranga sy atao izao noho ny tsy fahatokisan-tena: kolikoly, fanakantsakanana ny hafa, fanaovana fampielezan-kevitra alohan’ny fotoana… Ho tonga hatraiza? Vao manomboka ny raharaha…
Ho azo hatrany amin’izany ve ny vahoaka niaritra sy nangina izay ela izay?